UMATEWU 13 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UMATEWU 13UMATEWU 13
131Kwangaloo mini uYesu waphuma endlwini, waya kuhlala ngaselwandle. Sahlanganisana ngakuye isihlwele, 2saba sikhulu kangangokuba yena waya kukhwela esikhitshaneni, wahlala kuso. Isihlwele sona sema elunxwemeni.
3UYesu ke wasifundisa isihlwele izinto ezininzi ngemizekeliso, esithi: “Kwakukho umhlwayeli owaphuma waya kuhlwayela. 4Ekuhlwayeleni kwakhe inxenye yembewu yawa endleleni, zeza iintaka zayichola zayigqiba. 5Enye imbewu yawa endaweni elulwalwa, apho ibingenamhlaba waneleyo; yantshula ke kwangoko, ngenxa yokungabi nabunzulu bamhlaba. 6Kuthe ke, lakuba shushu ilanga, yatsha, yathi ngenxa yokuba ingenazingcambu zendeleyo, yoma kwaphela. 7Enye yawa endaweni enokhula, olwathi lwakukhula lwayiminxa. 8Enye yawa kumhlaba olungileyo, yavelisa isiqhamo: enye yanika ikhulu, enye amashumi amathandathu, nenye amashumi amathathu. 9Oneendlebe zokuva makeve.”
10Beza kuYesu abafundi bakhe, bathi kuye: “Kutheni na ukuba uthethe nabo ngemizekeliso?”
11Waphendula wathi: “Kungenxa yokuba nina nikunikiwe ukuzazi iimfihlelo ezingolawulo lukaThixo,Okanye “iimfihlelo zobukumkani bezulu” kodwa bona abakunikwanga. 12Lowo unako uya kunikwa, abe nako nangaphezulu; kodwa lowo ungenako uya kuhluthwa kwanoko anako. 13Ngenxa yoko ndithetha nabo ngemizekeliso. Kaloku bebona nje, ababoni; besiva nje abeva, bengaqondi nakuqonda. 14Kwenzeka kubo njengoko *umshumayeli uIsaya walithethayo ilizwi likaThixo esithi:
“ ‘Nàkuphulaphula niphulaphule, ningaqondi noko;
nàkujonga nijonge, ningaboni nto.
15Kuba ingqiqo yaba bantu ibuthuntu,
bazivingcile iindlebe zabo, bawavala namehlo abo.
Kungenjalo babeya kubona,
beve ngeendlebe zabo, baqonde ngeengqondo zabo,
baze babuyele kum, ndize ndibaphilise.’Isaya 6:9-10
16“Kodwa nina ninoyolo, kuba ninamehlo abonayo, kwaneendlebe ezivayo. 17Ke ndithi kuni, inene, baninzi *abashumayeli nabantu abangamalungisa ababenqwenela ukuzibona izinto enizibonayo, àbazibona, nokuziva izinto enizivayo, àbaziva.”
Ingcaciso yomzekeliso ngomhlwayeli
18“Nina ke, yiveni ingcaciso yomzekeliso ngomhlwayeli. 19Ukuba ubani uthi azive iindaba ezingolawulo lukaThixo,Okanye “ezingobukumkani bezulu” angàziqondi, uyeza ongendawo akuhluthe oko kwakuhlwayelwe entliziyweni yakhe. Yiyo leyo imbewu ehlwayelwe endleleni. 20Imbewu eyahlwayelwa elulwalweni ifanekisa lowo uzivayo iindaba ezi, athi kwangoko azamkele ngovuyo. 21Onjalo akanazingcambu zendeleyo; uma okomzuzwana kuphela, athi kwakufika imbandezelo okanye intshutshiso ngenxa yeendaba ezi, oyisakale kwangoko. 22Eyahlwayelwa endaweni enokhula izekelisa lowo uzivayo iindaba ezi, aze ke amaxhala eli phakade, nokulukuhla kobutyebi, kuziminxe iindaba, kungabikho siqhamo. 23Eyahlwayelwa emhlabeni olungileyo ifanekisa lowo uzivayo aziqonde iindaba ezi, aze avelise isiqhamo, omnye ikhulu, omnye amashumi amathandathu, nomye amashumi amathathu.”
24Wabenzela nomnye umzekeliso uYesu, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswa,Okanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomntu owahlwayela imbewu elungileyo entsimini yakhe. 25Kwathi ke, xa baleleyo abantu, kwafika utshaba lwakhe, lwahlwayela ukhula phakathi kwengqolowa, lwemka. 26Yakudubula ke ingqolowa, iqala ukuba neenkozo, lwabonakala ukhula. 27Zaza izicaka zaya kumnini-mzi, zathi kuye: ‘Nkosi, ibingeyombewu ilungileyo na oyihlwayeleyo entsimini yakho? Ngaba luvela phi na ke ukhula?’ 28Wathi kuzo: ‘Le nto yenziwe lutshaba.’ Zaza izicaka zathi kuye: ‘Ngaba ufuna siye kuluncothula na ukhula?’ 29Kodwa yena wathi: ‘Hayi, hleze kuthi xa nincothula ukhula, nincothule kwanengqolowa. 30Luyekeni ukhula, lukhule kunye nengqolowa, kude kube lixesha lokuvuna. Xa kuvunwayo ke, ndothi kubavuni: “Kuqala qokelelani ukhula, nilubophe izithungu, nilutshise, nize ke ingqolowa niyiqokelelele esiseleni sam.” ’ ”
Umzekeliso ngokhozo lwembewu yemostade
31Wabenzela nomnye umzekeliso uYesu, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nokhozo lwembewu yemostade, athe ubani waluthatha, waluhlwayela entsimini yakhe. 32Ukhozo lwemostade lolona luncinane kunazo zonke iintlobo zembewu, kanti lwakukhula luba lukhulu kunayo yonke imifuno, lube ngumthi omkhulu kangangokuba neentaka zifike, zakhele emasebeni awo.”
33UYesu wabenzela nomnye umzekeliso, esithi: “Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye: “Ubukumkani bezulu bunokufaniswa” negwele awalithathayo umfazi, walixovulela kumgubo ozizitya ezithathu, laza layinyusa intlama.”
34Zonke ezi zinto uYesu wazithetha kwizihlwele ngemizekeliso. Akathethanga nto kuzo kungengamizekeliso. 35Ngokwenjenjalo wakuzalisekisa okwathethwayo *ngumshumayeli esithi:
“Ndiya kuthetha ngemizekeliso,
ndizityhile izinto ezazifihlakele kwasekusekweni kwehlabathi.”Ndum 78:2
Ingcaciso yomzekeliso ngokhula
36Wazindulula ke izihlwele uYesu, wangena endlwini. Beza kuye abafundi bakhe, bathi: “Khawusicacisele umzekeliso ngokhula olusentsimini.”
37Waphendula wathi: “Lowo uhlwayela imbewu elungileyo *nguNyana woLuntu. 38Intsimi le lihlabathi. Yona imbewu elungileyo ngabantu abalawulwa nguThixo.Okanye “ngabantu bobukumkani bezulu” Ke lona ukhula ngabantu bongendawo. 39Utshaba oluluhlwayelayo ngumtyholi. Ukuvuna kukupheliswa kweli phakade. Abavuni zizithunywa zezulu. 40Njengoko luqokelelwayo ukhula, lutshiswe, koba njalo ekuphelisweni kweli phakade. 41UNyana woLuntu wozithuma izithunywa zakhe, zibaqokelele bangabikho apho alawula khonaOkanye “bangabikho ebukumkanini bakhe” bonke abalahlekisayo, nabo bonke abenza okuchasene nomthetho, 42zibaphose kwiziko elivutha umlilo, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka. 43Bothi ke abangamalungisa baqaqambe ngokwelanga bekwikomkhulu likaYise.Okanye “besebukumkanini bukaYise” Oneendlebe zokuva makeve.”
Umzekeliso ngobutyebi obufihlwe entsimini
44“Ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nobutyebi obufihlwe entsimini, waza ubani wabubhaqa, wabugqumelela kwakhona, wathi, evuya kakhulu, waya kuthengisa konke anako, wayithenga loo ntsimi.”
Umzekeliso ngeperile exabisekileyo
45“Kananjalo ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomrhwebi ohamba efuna *iiperile ezintle, 46othi akubhaqa perile ithile ixabisekileyo, aye kuthengisa konke anako, ayithenge loo perile.”
47“Kananjalo ukulawula kukaThixo kunokufaniswaOkanye “ubukumkani bezulu bunokufaniswa” nomnatha owaphoswa elwandle, wabambisa iintlobo ngeentlobo zeentlanzi; 48ekuthe, wakuzala, watsalelwa elunxwemeni, kwahlalwa phantsi, ezilungileyo zaqokelelwa esityeni, ezimbi zalahlwa. 49Kuya kuba njalo ekuphelisweni kweli phakade. Zophuma izithunywa zezulu, zibakhethe abakhohlakeleyo kwabalungileyo, 50zibaphose kwiziko elivutha umlilo, apho kuya kubakho ukulila nokungcungcutheka.”
51UYesu wathi: “Ngaba nikuqondile na konke oku?”
Baphendula bathi: “Ewe.”
52Waza wathi kubo: “Ke ngoko, umchazi-mthetho ngamnye othe waba ngumfundi wezolawulo lukaThixo,Okanye “othe waba ngumfundi wezobukumkani bezulu” ufana nomninimzi onokukhupha izinto ezintsha kwanezindala kuvimba wakhe.”
53Kwathi, uYesu akugqiba ukuyenza le mizekeliso, wemka apho. 54Efikile kowabo, wafundisa endlwini yesikhungo. Bâmangaliseka kakhulu abo bamváyo, besithi: “Ngaba ubufumene phi na obu bulumko? Le mimangaliso yona? 55Akanguye na unyana womchweli? Unina akanguye na uMariya? Abantakwabo asingabo na ooYakobi, noYose, noSimon, noJuda? 56Noodade wabo àbahlali apha bonke na? Ngaba lo mntu uzifumene phi zonke ezi zinto?” 57Ngenxa yale nto ke bambukula.
Waza uYesu wathi kubo: “Kakade umshumayeli uyayinikwa imbeko; kukwelakowabo kuphela, ekhayeni lakhe, apho angayifumani khona.” 58Ngenxa yokungakholwa kwabo akenzanga mimangaliso mininzi apho.